Chii chaunofanira kuita mushure mekuisa Slackware? Kurumidza uye nyore gwara | Kubva kuLinux
Chii chaunofanira kuita mushure mekuisa Slackware? Kurumidza uye nyore gwara
petercheco | | Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Mhoro shamwari kubva kuLinux, mushure menguva refu pasina kutumira chero chinhu, apa vane ini zvakare. Nhasi ndiri kuzokuratidza maitiro ekuti tigadzirire Slackware yedu mushure mekuiisa.
1 Nei uchishandisa Slackware?
2 Ndekupi kwandinoitora?
3 Chii chaunofanira kuita mushure mekuisa Slackware?
3.1 Wedzera mushandisi mutsva:
3.2 Bvumira sudo kumushandisi wedu:
3.3 Dudziro yacho kuSpanish:
3.4 Gadzira izvo zvinyorwa:
3.5 Gadziridza system:
3.6 Tanga iyo system zvakananga mu graphic mode:
3.7 Chinja iyo lilo yakamirira kubva pamaminetsi maviri kusvika masekondi mashanu:
3.8 Maitiro ekuisa mapakeji kuburikidza nesbopkg…?
3.9 Kana tikashandisa notibhuku:
3.11 Kumanikidza maturusi:
3.13 Mune kesi yekushandisa 64 bit system:
3.16 Dudzira Libreoffice:
3.17 32 zvishoma:
3.18 64 zvishoma:
3.23 Mutsva wekutanga menyu yeKDE kana iwe uchifarira (semufananidzo):
Nei uchishandisa Slackware?
Zvakanaka munhu wese anoziva kuti zvichave zvinopfuura mwedzi mishanu yapfuura ndakaita shanduko ye Debian a vhura pamachini angu ese kusanganisira maseva angu. Ikozvino ndakaita zvimwechete sekuzviudza ini .. Kana kuvhuraSUSE kwabuda SUSE uye izvi zvakabva kuSlackware .. Slackware ichave yakaita sei? Uye ndakafunga kuyedza :).
Uku kwaive kunakidzwa kwangu kuti ini ndaisakwanise kuve nemanzwiro uye kunyangwe munhu achifanira kutamba zvishoma ne roll ye usimbe, installpkg, sbopkg uye webhusaiti yeSlackbuilds, zviri pachena kuti zvine kukosha sezvo isu tichiita kuita kwatisingazoone kunyangwe Debian, Fedora, RHEL, SUSE, Arch, etc ...
Iyo yega distro iri kuratidza mashandiro ayo ndeye Gentoo uye izvi zvinoshaya nguva dzekuunganidza uye kuisirwa kureba, nepo Slackware yakaiswa mumaminitsi makumi maviri (zvichienderana nesoftware yatinosarudza): D.
Yangu nyaya ... nyaya yaDebian, baba veLinux, wandinonamata kwemakore uye kubva kwandakapfuura nemadzikoma eRHEL nevana vavo, uye gare gare nemwanasikana webazi rakazvimiririra rakashamaSUSE raamai SUSE iro rakandivhurira nzira inoenda kune imwe nyika isati yamboonekwa. Ivo amai veLinux vanogovera .. Slackware: D.
Mugwagwa murefu wakanditungamira kune nyika inonzi Linux chaiyo. Nyika inotaridzika kunge Unix. Nyika umo mapakeji akaunganidzwa. Nyika isina mapakeji emarara isina kuiswa kana ichida kuisa chishandiso sezvo isu tichingoda kwavo kutsamira. Nyika yekugadzikana. Nyika isina versiontitis uye dystrotitis.
Kunyangwe zvakadaro, iyi distro iripo, inogadziriswa nguva nenguva .. Kupa muenzaniso: Slackware 14.1 Yakabuda musi wa7.11.2013. Isu tese tinoziva zvakaitika munguva pfupi yapfuura neOpenSSL uye isu tese tinoziva kuti makuru madhizaina akachengeta yavo OpenSSL shanduro. Panyaya yaDebian kana RHEL, vakanamatira yavo vhezheni 1.0.1e. Slackware 14.1 Iyo zvakare yakabuda neiyi vhezheni, asi payakaona iyi bug, yakasarudza kuisa vhezheni 1.0.1g yakanangana nebazi rakagadzikana. Iyi distro inosarudza kuisa iyo yepamutemo vhezheni pachinzvimbo chekugadzira zvigamba zvinogona kukonzeresa zvimwe zviputi zvakasiyana.
Saka ndakagara neSlackware pane angu ese michina uye maseva uye ini ndinoronga kugara pano. Pakati pemwedzi iyi ndanga ndichiyedza iyi distro zvakanyanya, zvakadzama kuziva kana danho iri rakarurama. Uye mhinduro ndihungu .. Amai hongu
. Iyi distro yakandikunda, ikandibata chose uye pasina kupokana ndicho chinhu chakanakisa chandakaedza. Handina mamwe mazwi.
Pasina imwezve ado, mimwe mifananidzo yesystem yangu:
Ini handisi kuzopinda maitiro ekumisikidza pachayo sezvo zviri nyore. Iyo mameseji modhiyo simaki, asi inotitungamira nhanho nhanho.
Chii chaunofanira kuita mushure mekuisa Slackware?
Wedzera mushandisi mutsva:
Munguva dialog inoonekwa kana izvi zvikaonekwa:
tinya kumusoro kiyi pane ako keyboards uye pakupera kweboka mutsetse uyo uri auto-wapedza neakanzi kiyi wedzera: vhiri uye dzvanya pinda.
Bvumira sudo kumushandisi wedu:
Isu tinochengetedza gwaro neCTRL + O uye kuvhara neCTRL + X.
Dudziro yacho kuSpanish:
Nyora mitauro yese iripo: nzvimbo -a
Chinotsiva kunze LANG = en_US:
Tsiva setenv LANG en_US:
Gadzira izvo zvinyorwa:
Regedza zvinongedzo zvePortugal kubvira Spain haina zororo:
slackpkg yekuvandudza slackpkg yekuvandudza gpg slackpkg kusimudzira-ese
Tanga iyo system zvakananga mu graphic mode:
Chinja id: 3: initdefault: kuenda ku:
Chinja iyo lilo yakamirira kubva pamaminetsi maviri kusvika masekondi mashanu:
Tsiva timeout = 2000 na:
Iye zvino taisa chishandiso chinoshanda kwazvo, icho chinounganidza nekuisa zvirongwa zvedu:
Isu tinogadziridza dhatabhesi yezvirongwa zviripo paSlackbuilds.org:
Maitiro ekuisa mapakeji kuburikidza nesbopkg…?
Isu tinoona kuti pasuru yacho inowanikwa pa http://slackbuilds.org/ uye nekucherechedza kutsamira kwese.
Wobva wangomhanya: sbopkg -i "mutete" (Icho muenzaniso wekuisa slim). Usakanganwa kuti usati waisa pasuru yatinoda kuisa tinoisa zvese zvinoenderana nayo. Iye zvino taisa mapurogiramu ekutanga:
Kana tikashandisa notibhuku:
sbopkg -i "orc texi2html libebml libmp4v2 libcuefile libreplaygain lame x264 a52dec faad2 speex twolame lua lua portaudio libass libavc1394 libdc1394 libdca libdvbpsi libdvdcss libdvdpup libprodropa
Mune kesi yekushandisa 32 bit system:
Dhawunirodha jdk kubva kuOracle mune yayo 7u51 vhezheni (jdk-7u51-linux-i586.tar.gz):
Isu tinodhawunirodha iyo slackbuild:
Namatira iyo faira jdk-7u51-linux-i586.tar.gz mune iyo jdk dhairekitori ratakaburitsa kare uye kumhanyisa script:
Izvi zvinogadzira pasuru inogona kumisikidzwa seichi (unogara uchiona nzira uye zita repakeji yakagadzirwa) uye tinoiisa ne:
Mune kesi yekushandisa 64 bit system:
Dhawunirodha jdk kubva kuOracle mune yayo 7u51 vhezheni (jdk-7u51-linux-x64.tar.gz):
Namatira iyo faira jdk-7u51-linux-x64.tar.gz mujdk dhairekitori ratakaburitsa kare uye kumhanyisa script
Isu tinotora pasi slackbuilds kubva ku libreoffice-helppack uye libreoffice-langpack:
Isu tinosunungura mafaera akadhanilodha.
Isu tinodhawunirodha maoffreoffice mapakeji:
Isu tinonama mafaera aya pasina kuadzvinyirira iwo mune inoenderana slackbuid maforodha uye kuita script mune ese ari maviri
Uye isu tinoisa mapakeji akagadzirwa (iwe unogara uchiona nzira uye zita repakeji yakagadzirwa):
Unzip iyo uye pasina kuiisa, tinogona kuishandisa nekushandisa timu yekutarisa package mune ino folda.
Isu tinowedzera iyo package kune yekutanga runyorwa:
Tinonyora izvi kumagumo:
kana [-x /etc/init.d/ufw]; ipapo /etc/init.d/ufw tanga fi
Isu tinogonesa iyo firewall:
Tinobvumira ssh kana tichiishandisa:
Mutsva wekutanga menyu yeKDE kana iwe uchifarira (semufananidzo):
Uye voila .. Nezve izvi vanowana sisitimu yakagadzirirwa kushandiswa kwese: D. Uye iwe unoona kuti haina kuoma sezvazvinogona kuratidzika. Kwazisai linuxeros uye usakanganwa kupindura :).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Dzidziso / Mabhuku / Matipi » Chii chaunofanira kuita mushure mekuisa Slackware? Kurumidza uye nyore gwara
Uye (vector linux) yakafanana nehukasha hweSlackware
Hongu asi hazvina kufanana 😀
Ini ndangoitika ndichiti hello =) ...
Slackware haizove nababa asi ini ndinogona kufungidzira mumwedzi mishoma kuti iwe waedza "linux kubva pakutanga", uye kuti iwe wachinja ako ese michina uye maseva ... neinoenderana nhungamiro 😉
Pindura kuna didaz
Handikwanise kufungidzira ndichiita chinhu chakadai kupenga: D. Ini ndanga ndichifunga nezvazvo pakati peSlackware neGentoo. Ndakaenda kubva kuna baba vaDebian kuenda kuna amai veSlackware uye pano ini ndinonyatsogara:
Tarisa uone nguva yekutsigira iyo iyo shanduro dzeSlackware dzine:
Ini ndinofunga yakakosha kuti ishandiswe mukugadzira.
Debian yangu inoremekedzwa uye inokudzwa mashandiro sisitimu yandinofungidzira rimwe zuva ichabviswa mukombuta yangu ... Pfungwa yekuisa slackware yakayambukawo pfungwa dzangu kare kare, asi pandakayedza yaive panguva yandakaita kusanzwisisa zvimwe zvinhu uye nzira yakandiomera saka bvisa kuvhiya ... Sezvaunotaura, Gentoo anotora ("zvishoma") asi zvichazotevera ...
Zvisinei, makomendi acho akanaka kwazvo pamusoro peslackware, ndinotarisira kuenderera mberi nekuverenga zvakawanda nezvazvo uye maitiro akaoma nemhinduro dzinoonekwa munzira ...
Rarama hupenyu hwakareba… !!!
Pindura kuna dbillyx
Slackware kugovera kwandakafunga nezvekuisa kanoverengeka, ndakaverenga makomendi ekuti ndiyo yakadzikama (asi chaizvo). Zvirokwazvo, ini ndaizoshamisika kana iine mabhugi mashoma pane CentOS, iyo yakandipa 0 nyaya munguva yandakaiyedza.
Nekudaro, ini ndinogara ndichidzoka kuchinhu chimwe chete: kunze kwemapakeji. Icho chokwadi chekuti Debian anotangisa akatsiga nemapakeji echinyakare hachisi whim, imhaka yekuti rusununguko rweGNU / Linux pamwe nemaraibhurari epasi rose zvinokonzeresa kuti kupokana pakati pezvirongwa kungamuka, uye bvunzo nenguva zvinodiwa kuti zvionekwe. Slackware inonyatso shanda nemazvo kurongedza kwayo kwepamutemo, asi Slackbuilds haina kujeka, iwo mapakeji angangodaro asina kunyatso kuyedzwa nemumwe uye kuti kana nguva yasvika vanokwanisa kumira. Kana kunyangwe muDebian zvaitika kwandiri nemapakeji akati wandei, handina chivimbo chekuti Slackbuilds haichazviita. Kune rimwe divi, nechikamu chekunze kune zvakare dambudziko rekuchengetedza: kana kukanganisa kukaonekwa, vanozoigadziridza here? Pamwe hongu, asi panogara paine zvirongwa zvinosiiwa (kana vanorodha vachisiya), ipapo hazvina kunaka. Icho chinhu chandakatambura muCentOS: hapana dambudziko mushure mevhiki rekushandisa (iyo PAMWE distro mune chimwe chinhu chakadai chakaitika kwandiri uye ndinozvitaura, nevamwe vese chimwe chinhu chagara chichiuya), asi zvino inguva yekudhonza matura ekunze uko iwe Iyo yepakati sisitimu yakasimba kwazvo asi mashandisiro auri kuzoshandisa hapana anovimbisa iwe chero chinhu. Slackware semuenzaniso haina chekuita (LXC zvakanyanya), iwe unofanirwa kuenda kuSlackbuilds kuti utore.
Iwe unganyatsokodzera kusiya Debian kumashure uye kuita shanduko neakadai chibayiro, petercheco?
Hi OtakuLogan uye ndinotenda nekuda kwekubatsira: D. Ini ndinobvuma kuti kudzikama kweDebian kana RHEL / CentOS iri padanho repamusoro. Ndakaenda nemumaviri ma distros aunotaura uye ndinogona kutaura kuti pese paunoshandisa repo repamutemo une chokwadi chekuti 99% hapana chichaitika kwauri. Ehezve, kana iwe ukaisa iyo rpmfusion, adobe uye epel zororo pane yako CentOS, zvinhu zvinoshanduka zvakanyanya. Kwete chete nekuda kwemapakeji iwe auchazomisikidza kubva kune aya zororo, asi nekuda kwepasina junk mapakeji ayo aya anokuisira iwe uye nemipengo yavanogona kunge iine.
Neslackbuilds nyaya yacho yakati siyanei sezvo iwe uchiziva mapakeji uye kutsamira kwauchazomisikidza uye kuti haumbofi wakaisa package isingakodzere kuita chero basa re software iyo iwe yaunoda kuisa ne slackbuilds. Zvakare ramba uchifunga kuti slackbuilds inoshanda nekodhi kodhi uye inounganidza iyo package kune yako system. Iwe zvakare unofanirwa kugara uchifunga kuti chete akatsiga vhezheni yemapakeji uye akaedzwa mapakeji anodhindwa mune slackbuilds. Semuenzaniso: VLC iri papeji yepamutemo inowanikwa mushanduro 2.1.3 nepo mune slackbuilds yayo vhezheni iri 2.1.1. Nezve kusagadzikana kwesisitimu .. Kana iwe ukafunga nezvekuti mapakeji akaumbirwa komputa yako, izvi zvakafanana zvinoderedza kusvika ku0 kusagadzikana kwepc yako nekuti chero zvazviri kusagadzikana kwaizongokanganisa chirongwa chega. Ndinokurudzira kuti uite kuravira kudiki kweVirtualbox uye uchaona zvakanakira distro iyi.
Ini zvakare ndinokuudza kuti ini ndaive nemafungiro akafanana newe usati waedza Slackware yangu: D.
Kwaziso kubva kuLinux uye ndinovimba ndapindura mibvunzo yako 🙂
Huya, zvakandiita kuti ndide kudzokera kune slackware.
Ndinoda slackware yekuisa zvinotsamira uye kutenderera, asi hazvisi zvese zvingave haha. Asi ini ndinoda slackware kune debian kana gentoo.
Zvakanaka, kudzoka zvanzi .. Slackware ine iro razvino bazi uye unotova naro richitenderera 🙂
Kune izvo kune Arch, irikunguruka uye neABS uye PKGbuilds unogona kuita zvakangofanana nezvakaita neSlackbuilds uye kana uchida nemirairo "makepkg -s" Ini zvakare ndichagadzirisa otomatiki.
Kubva pane zvandinoona, ini ndinosarudza Arch Linux, kunze kwekunge iwe uchinge wandiudza imwe bhenefiti iyo Slackware ine zvine chekuita neArch, nekuti kusvikira zvino handina kuona
vese vane nyasha dzavo…. paunoneta neumwe, wobva watendeukira kune imwe uye zvichingodaro haha
Iwe unoshandisa windows 7 uye haisi kutenderera haha
Mhinduro yako inonakidza kwazvo, petercheco. Ini ndinozvifunga, zvirinani kuti ini ndichatevera gwara rako kuti ndione kuti rakadii. Ndatenda!
Nhungamiro yakanaka kwazvo, isu tichafanirwa kuyedza. Kubva pane zvaunotaura, ini ndinofungidzira kuti usati waisa pasuru unofanirwa kutarisa zvinoenderana nekudaro kana iwe ukaisa iwo mapakeji iwe uchafanirwa nekuisa zvinoenderana. Ini ndichafanirwa kutarisisa. Zvinotaridza kwandiri zvakanyanya Bsd maitiro kupfuura linux ... Thanks 🙂
Chokwadi. Iwe unofanirwa kuisa zvese zvinoenderana pamberi pechirongwa pachacho. Iko kunakirwa kuri ne sbopkg sezvo iwe uchizviisa zvese mune imwe .. Muenzaniso: Tarisa pane rairo yekuisa VLC. Zvese zvinhu pamberi pevlc (mune iwo iwo murairo) zvinoenderana neVLC kana pazvirongwa zvinoda VLC. Mune mamwe mazwi, iwe unotaurira sbopkg mune yekuraira zvese zvinoenderana uye chirongwa chekupedzisira kumagumo uye zvinotarisira kurodha pasi, kunyora uye kuisa pasuru yega yega. Inoenda pasuru nepakeji kudzamara zvese zvaitwa. Uye kana Slackware iri padhuze neUnix 😀
Iwe unofanirwa kukorokotedzwa nekuti iwe unoshandisa Slackware uye nekuti pane panenge pasina zvinyorwa kubva kwaari. Kunyangwe zvichitaridzika kwandiri kuti iwe wakawedzeredza nekuita. Pfungwa panofanira kuve nezvakawanda, asi hachisi chinhu chinoshamisa zvakadaro. Uye ini ndinokuudza kuti ini ndaishandisa Arch uye Slackware panguva imwe chete. Iko kunozivikanwa kuri muGentoo, kunyanya KDE inondishamisa.
Kunyangwe ini ndichinzwisisa, ini ndaivewo nemanzwiro ekuwedzera optimization uye zvakanaka kwazvo. Asi hazvienderane nesita yangu yeSlackware, ndakabhoikana ndikakanganwa nezvazvo, pachinzvimbo ndinochida zvirinani kuti zvese zvinoitwa sei kuGentoo.
Gentoo iri nyore kwandiri kuti ndishandise, zvingangoda imwe ongororo mukushandisa, asi ndiyo diki yacho. Kana isu tisingafunge nezve kuisirwa.
Pindura kuna amulet_linux
Ndatenda zvikuru: D. Iniwo ndinokukorokotedza iwe nekushandisa Gentoo uye ndinobvuma kuti zviri nyore kwazvo kuchengetedza kana yaiswa chete yekutenda kune portage: D. Gentoo kunyanya inondikwezva asi kuiswa kweGentoo kunononoka uye ini handikuudze chero chinhu kuti ubatanidze ese KDE iwe unofanirwa kushivirira zvikuru Kana zviri zvekuita, handikwanise kupa maonero sezvo ini ndakaita sarudzo yemapakeji panguva yekumisikidza, saka ini ndinongova nemaapplication ayo andaifarira kuve nawo uye senharaunda yandakaisa chete KDE. Kunzwa kwandinako mulaptop yangu ine musimboti uye gig yegondohwe ndeyekuti Slackware ine KDE inomhanya zvakanyanya, nekukurumidza uye misiyano yedistro iyi naDebian, Arch, openSUSE mune yangu nyaya inonyanya kuzivikanwa: D. Ini ndinofunga zvinoenderana nehardware iyo munhu yaanofanira kuona zvakanyanya kana kushomeka mutsauko wedistro yega yega.
Ndinokutendaiwo. Iye zvino izvo zvandiri kufunga nezvazvo, iko kushoma kumisikidzwa kwe KDE paDebian kana Arch inomanikidza iwe kuti uise zvinotenderwa mapakeji. Kune rimwe divi, muSlackware unogona kufuratira akawanda nekuti haadi iwo. Zvakafanana naGentoo, ine matatu akasiyana KDE kuiswa, iyo izere, yekutanga, uye yepamusoro pane isina kudikanwa ekuwedzera. Izvo zvandakasarudza yekupedzisira. Zvakanaka.
Pane yangu PC ine Debian Wheezy ine 1GB ye RAM uye 2.8 Ghz Pentium D, kutanga, ini ndakaisa iyo KDE-Meta package ichisarudza yakakosha kushanda nayo; Ipapo, ndakaramba ndichirovera GNOME 3.4 pachayo ndiri pa KDE desktop, uye zvirokwazvo, ndinogadzikana ne KDE yangu pane desktop yangu PC.
Ndiine Slackware, ini ndakaedza mashandiro ayo mune chaiyo muchina uye KDE, nezvose zvayo zvinhu, chaizvo inomhanya sesirika. Chishamiso cheGNU / Linux distro uye chimwe chinhu chandisingadembere kuyedza.
Zvakare, Slackpkg inokupa iwe rusununguko rwekusarudza kutsamira kwaunoda kuisa mune bhanari package (iyo APT naPacman vasina kumboona).
Zvakanaka, mashandiro acho anoonekwa, uye zvakawanda. Zvese zvinhu zvakanyorovera. Kuti ndikupe muenzaniso, yangu Slackware 64bits ine XFCE desktop inoratidza kushandiswa kwe245mb ye RAM mushure mekubhootisa. MuOpenSuse kana Fedora ine desktop imwechete kushandiswa kweinosvika 354mb (wabvisa mamwe maitiro kubva pakutanga).
Kune rimwe divi, ini handikurudzire chero munhu kuti ashandise izvo zviripo, nekuti zvakajairika kuti mushure mekugadzirisa chimwe chinhu hachikushandire iwe kana icho hachingotangise sisitimu. Nguva yekupedzisira pazvakaitika kwandiri, GDM yakamira kushanda (ini ndaifanira kushandisa Ctrl + high + F1 kutangax uye kuchinjira kuSlim), Gedit, Viewnior nemamwe mapurogiramu.
Mr. Chikepe akadaro
Petercheco yakanaka, kutanga kwezvose kutenda kune mutungamiri.
Kuverenga zvese nhanho nhanho ini ndawana chirevo mumatanho ese kusara kweumwe:
Sei uchiita izvi, zvichienderana negooglecode.com, isu tichigona kuisa dbopkg 0.37 kubva kune repos repamutemo zvinoenderana webhusaiti webhusaiti?
Nekuzviita neimwe nzira, isu hatizviratidze pachedu kuve neimwe yechinyakare yeramangwana?
Pindura Mr. Chikepe
Mhoro, zvinonakidza izvo iwe zvaunoisa asi pane iyo yepamutemo peji reSlackware kunouya izvi:
Mune repos repamutemo yedistro haina kunanga :).
Chinhu chinodadisa chakadii, zvinogoneka sei kuti ivo vasina kugadzirisa kukanganisa kukuru kudaro mu http://www.sbopkg.org/downloads.php?
Ndatenda nekukurumidza kupindura.
Ini ndaive nechimwe chinhu chekukuudza, kunyangwe ndichifungidzira kuti ini ndatoziva mhinduro yacho. Chimwe chezvikonzero chakaita kuti ndibve paArch yaive yekuti haina zvayakaita kunze kwekutsvaga matambudziko ekuchengetedza kwese kwese, uye ini ndaisada kuve nyanzvi mukuchengetedzwa kwemakomputa kuti ndikwanise kumisikidza mamwe ma parameter ayo mune kumwe kugovera kwatova kutouya. kwandiri nekukanganisa.
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika neSlackware, ndinofungidzira, hapana matanho ekuchengetedza kubva paminiti 1, handiti?
Iwe unofanirwa kuzvimisikidza iwe pachako.
Ini handifunge kuti unofanirwa kuramba kupindira senge kuArch, nekuti, mune imwechete Slackware simaki, inokupa iwe iyo nzvimbo yekumisikidza kuisa SELinux uye kunyangwe zvakadaro, haina kudya zviwanikwa.
Nezve Arch, chakandityisa yaive kumhanyisa kwavakavandudza iwo mavhezheni ezvinhu zvavo zvakanyanya, kusvika padanho zvekuti vakandiita kuti ndidzokere kuMatatu Marys ekugadzikana muGNU / Linux (Debian, Slackware neRHEL / CentOS ).
Zvakanaka Eliotime3000 yakatokupindura, asi sezvaungaona mune yangu posvo ini ndinoisawo mubatsiri wekugadzirisa zvimwe: ufw. Izvi zvinokutendera iwe kuwedzera paramita kune iyo firewall (netfiter kana iptables ... chero chaunoda kuitisa) nenzira inokurumidza uye yakapusa nzira: D.
Zvakare, kuti uwane zvakanyanya kuchengetedzeka, unogona, semuenzaniso, kuisa fail2ban kuchengetedza pc yako kubva pakuedza nessh kana mamwe masevhisi: D.
Ini ndanga ndichida kuisa maoko angu pane ino distro kwenguva yakareba, asi ini ndinofunga manikidza kuisa kutsamira kunogona kuve kunogumbura chaiko, zvisinei nekutenda kwedzidziso, pamwe rimwe zuva ndichafara.
Unogamuchirwa. Ona kuti ini ndinobva kune otomatiki masisitimu kuti ndive nekutonga kwakawanda pamusoro pechirongwa uye kutsamira 😀
Changu chinodiwa KISS distro ... Muchokwadi, ndiyo yakanakisa KISS distro yandakaedza kusvika parizvino, sezvo iine mukana wekushandisa ese mabhinari (senge Debian nevamwe vachishandisa slapt-tora kana slackpkg kuisa kubva kumashure kumashure) kana kuunganidzwa saGentoo (sbopkg).
Kunyange zvakadaro, distros seSlackware, hapana, uye zviteshi zvepamutemo (seSlacky.eu) zvinonyanya kuziva zviputi uye kugadzirisa kune yakanyanya kugadzikana vhezheni uye kugadzirisa kodhi yekodhi.
PS: inoita kuti iwe ude kurodha pasi Iceweasel kodhi kodhi uye kuiisa ne sbopkg.
Chokwadi: D. Nenzira .. Ndeipi distro yaunoshandisa izvozvi? Ndoziva iwe wanga uripedyo neSlackware, Debian uye Arch asi ndeupi wako waunosarudza ndiye chero munhu anofungidzira 😀
Kutaura chokwadi, distro yangu yandaida ndeyeDebian, sezvo ichindipa kumisikidza nekukurumidza uye nyore kushandisa uye kugadzirisa (kana mumwe munhu achivenga iyo terminal, ini ndinoisa iyo yepakati software kana iri GTK desktop kana Apper kana iri KDE).
Padivi reSlackware, ini ndinoisiya kumaPC asingatsigire tsanga nePAE senge yangu yekare Pentium IV kana maPC asingamhanye neWindows XP.
Zvisinei, ndinovimba mukoma wangu anokwanisa kufambisa mafaera ake ese kubva kuPC yake kuisa Slackware 14.1 uye nekudaro, kuti anoramba achinakidzwa ne XP neVirtualBox (akaifarira nekukurumidza pandangoiisa pabhuku rake reWindows 7, nekuti zvinoenderana pane zvivakwa zvekushandisa kuchirongwa chePIC uye maPLC).
eliotime…. ndiregerere kusaziva .. asi musimbe .. ndinogona here kuisa .deb package ... ??????
imhaka yekudhindisa madhiraivha angu ..
petercheco .. gwara rakakura kudhinda .. uye iwe wakandiita kuti ndide kuyedza ... ... ndinotenda kwazvo ..
Kana iwe ukashandisa Alien packet converter, hongu; asi kana iwe uchida kushandisa slackpkg kuisa .deb mapakeji, kwete.
Wakagamuchirwa @patodx 😀
Rudimental zvishoma ahahaah
Na? Ini ndingati yakakura asi nekukurumidza kusanganisira iyo software yatinoshandisa zvakanyanya 😀
Meh, zvirinani haaise mamwe mapakeji mauri ausingade.
Chokwadi .. Mushure mekunge mumwe nemumwe asarudza mapakeji avanoda kuisa .. Ingo tsvaga ivo pa slackbuilds.org uye woiisa nemirairo sbopkg -i "package_name" (kana isina zvido) kana sbopkg -i "zita_of_dependency package_name "(Yekuisa kutsamira + nepakeji pacharo) 😀
Ndakaedza Slackware mwedzi mizhinji yapfuura pakaburitswa vhezheni 14.0, kumisikidzwa kwayo kwakange kwakasiyana nekumwe kugoverwa asi kwete kwakaoma sekumwe kupendwa nevamwe vanhu uye kwakandipa pfungwa yekuchengeteka (padanho remapakeji epamutemo) andakapiwa mashoma; asi ini ndinozviona sekukanganisa uye kutambisa nguva kusakwanisa kuisa nekumisikidza sisitimu ine yakakosha kwazvo kana kuve neyakagadziridzwa kernel uye nekudaro kudzikisa nguva yekurodha. Ehe, vazhinji venyu muchandiudza kuti ndinogona kuzviita nemaoko mukumisikidza, asi ndizvo chaizvo zvandinoshoropodza: ​​kusarudza nemapasuru anodarika zana kana ndiri kuzoiisa kana kwete.
Kazhinji, iyo Slackware inosimudza inokuratidza runyorwa rwepi boka remapakeji iwe aunoda kuisa (kubva kune yakakosha kusvika kune akacheka, senge KDE mutambo mapakeji), asi kutaura chokwadi, iyo kernel bhutsu iri kune iyo system. bhuti rakaenzana zvakakwana neUNIX / BSD (muchokwadi, OpenBSD inotora zvachose vapfuri).
Ini handikwanise kubvuma zvimwe .. Unogona kuisa iwo masoftware mapoka A, AP, D, F, K, L, N, X uye watove ne base system iyo mushure mekutanga zvekare iwe kuisa chero chaunoda: D.
Zvishoma pane izvi. http://www.slackwiki.com/Minimal_System
Iyo inotungamira yakanaka, kunyangwe ndichiona mashandiro anoita ini ndinofunga ndiri mukuru weArch mushandisi.Chimwe chinhu chinondirovesa ndechekuti une akawanda maperengo kukanganisa (kunyanya zvakapfuura zviito zvakapusa zvisina mataurirwo). Ini ndinofunga icho chinhu chinogara chichi torwa pasina asi chero peji rehunhu rinofanira kuona izvo zvikanganiso. Ndinovimba kubva kuLinux vanoisa simba rakawanda mune izvo.
@Petercheco anobva kuCzech Republic, saka haugone kumupa mhosva seizvi nekuve nezviperengo zvakashata zvakadaro (kutaura zvazviri, dzimwe nguva kufanira kunyora nemitauro miviri kana yakawanda zvinogumbura).
Zvisinei, icho chinyorwa chakanyanyisa kukwana kupfuura changu, chinokodzera imwe kiredhiti.
Ini ndiri mushandisi weDebian asi ini ndakaedza kuenzanisa zvinenge zvese zvakagoverwa, zvirinani zvese zvepakutanga zvinobva kune zvimwe zvese. Pakati pavo, Slackware ndiyo yandinoda zvakanyanya, mashandiro e slackbuilds pakutanga anogona kunge akaomarara asi haina kunyanya kupfuura iko Kushandisa AUR muArchLinux.
Slackware senge Debian inonyanya kugadzikana yakatarisana zvisinei kana iri vhezheni yazvino kana isina bug-isina, ndosaka iri yega yega yekuparadzira iyo ichiri kushandisa Lilo pane grub sebhootloader.
Zvinotaridzika kwandiri semugove wakanaka kwazvo, kana ndikaenda 'kubva kuDebian ndinowira mumatanho eSlackware, nekuti Gentoo yakanyanya kuomarara kushandisa
Hongu, ichokwadi kuti ndichave nekumwe kuperetera, asi ndizvo zvinoitika kana munhu achinyora chinyorwa na12: XNUMXpm muCzech Republic: D. Uye zvakare, inofanirwa kutariswa kuti vatauri veSpanish pachavo vanoita zvikanganiso zvekuperetera kutakura: D.
Ndinobvumirana. Oi en dya vanhu havanyore vien, zon hunos berdaderos hanimales yelenhua casteyana.
Ini ndinofunga Petercheco anofanirwa kunyora kubva izvozvi muchiCzech mutauro, saka isu tinonzwisisa zvirinani izvo shamwari yedu inoreva mune vadzidzisi, nekuti chiSpanish hachisi mutauro wake.
Mashoko ako akaita kuti masikati angu kubasa afare: D. Ndatenda :). Ndiri kurevesa ndikati, ndaseka kwemaminetsi gumi diez
CHIMWE CHIMWE CHINHU ..
Hos ini ndinokurudzira mune chikamu chekumisikidza repo kusunungura zororo re:
Izvi zvinoonekwa pekutanga mugwaro: D. Izvo zviri kuitira kuti kana repository yenyika dzinoenderana dzikundike.
Ndine urombo "ndinokukurudzira"
Ini ndinobvumirana zvachose nechinyorwa ichi cheSlackware, asi, ndakamhanyira mumatambudziko pandakagadzirisa network yangu yeLan, handina kuwana kwese, mhinduro kumatambudziko enetiweki yangu, nekudaro, ndadzokera kuvhura, izvo zvinoita kuti zvive nyore kugadzirisa kweLan. Ndinokorokotedza avo vanoda uye vane nguva yekudzidza, asi semushandisi ari kutsvaga mhinduro nekukurumidza, ini handina kuwana Slackware.
Munguva yekumisikidza maitiro, mugadziri anobvunza kana iwe uchida kumisikidza network. Unoti hongu uye wobva wasarudza iyo Network Manager sarudzo. Chenjera, pane zvingasarudzwa zvina uye chimwe chazvo iDHCP. Usasarudze DHCP kana isiri Network Manager. Yakagadziriswa dambudziko nekuti network yako yekubatana ichagadziriswa ne Network Network Manager
Mamwe info, ayo anogona kukufadza:
Ini ndaisa slackware pane Nec Versa M320 ndikatevera mirairo yako, kunyanya iyo sbopkg -i "kcm_touchpad" asi yangu yekubata haishande.
Ndakatarisa tarisa asi handina kuwana mhinduro yekunonoka
Ini ndinofanira kugadzirisa iyo x11 yekumisikidza faira neruoko?
Pindura kuna santilin
Mhoro, kana iwe ukaisa iyi pasuru iwe unowana izvo zvingasarudzika zvekumisikidza rako rekubata mune KDE system zvaunofarira -> zvigadzirwa zvekuisa -> touchpad.
Pano unozvigadzirisa kune zvaunoda: D.
Kana pachinzvimbo chekushandisa KDE iwe unoshandisa XFCE enda pakati pe xfce -> mbeva uye yekubata padhi uye gadzira iwo anodikanwa marongero :).
Iyo sisitimu haisi kuona yangu yekubata padhi. Pandinopinda iyo touchpad yekumisikidza kubva kde, mune ruzivo inondiudza zita reTouchpad: Mudziyo hauna kuwanikwa
Kunyanya kuda kuziva yako kesi .. Iyo yekubata padhi haishande zvachose kana inoshanda hafu? Wakaisa sei iyo system?
Hapana kana chinomboshanda. Kuiswa kwacho kwakaitwa nekutevera iyi dzidziso.
Iwe unoziva here zvekuita kuti utarise kana iyo kernel inotakura iyo yekubata padhi?
Asi ini handina kutaura nezve iyo yekumisikidza .. Changu chinyorwa chiri nezve iyo yekumisikidza-kumisikidzwa: D.
Yako yekubata padhi inogona kunge isingatsigirwe, asi ino inguva yekutanga yekuiona :). Kana iwe ukaisa package package X panguva yekumisikidza, yako yekubata padhi inofanirwa kushanda zvakanaka.
Mukumisikidzwa kweSlacware chinguva chinowoneka mairi chinokubvunza iwe mbeva ipi yaunoda kushandisa. Iwe unofanirwa kusarudza default Vídně: imps2mouse.
Kana iwe uchida kuita yekumisikidza gadziriso, iwe unofanirwa kugadzirisa kana kugadzira iyo faira /usr/lib/X11/xorg.conf.d/10-synaptics.conf
Yakanakisa mupiro, ndakanga ndisati ndashandisa slackware kwemakore, nekuparadzirwa uku ndakatanga muGNU / Linux neshanduro yegumi, ndaifanira kuisiya kwenguva yakareba nekuti ndisati ndaida kuisa zvese nemaoko uye ndaifanirwa kutsvaga yega yega kutsamira. , asi hei ndichaenda kuzviyedza futi, Thanks for the Gwara
Pindura kune arenita
Yakanaka kwazvo posvo; iyo yepamusoro uye iri nani, iwe unogona kugara uchidzidza marongero anogona kunge asiri mune mamwe ma tutorials uye zvinopesana.
Chinhu chinomira pachena muSlackware ndiko kusangana kwe KDE uye iko kuyerera uko kunoshandiswa nemashandisirwo, uye hongu, ini ndakazviona zvakare zvishoma kukunda kupfuura Archlinux.
Ndatenda zvikuru 😀
Iko kuita, ini ndinogona kukuisa iwe mubvunzo, koGentoo?.
Ini ndichakupa iyo vs yeCentOS yangu netsika kernel vs Slackware ine stock kernel ... ngatione ram, kumhanya uye kugadzikana kurwisa CPU kushushikana ndiani anowana mukana mukuru
Zvakanaka, gadza michina miviri chaiyo .. Imwe ine shoma CentOS netsika yako yekernel uye imwe yacho ine shoma Slackware (isa mapurogiramu esoftware kuve neiyo shoma Slackware yekuisa: http://www.slackwiki.com/Minimal_System) uye shambadza zvawanikwa 😀
yakanakisa chinyorwa, makorokoto, ini ndanga ndichida kuyedza iyi distro, uye iwe wakakwanisa kunditora kuti ndiburitse ISO ipapo.
Kungori mubvunzo mudiki, ini ndiri kuenda kuiisa pamushini wangu wekuyedza, uko kwandine mamwe akati wandei ma distros akaisirwa, Debian Jessie, Arch, Ubuntu 14.04, OpenSuse, KaOs, Trsiquel, uye vese vanobhururuka kubva kuGRUB2. Ndiri kuona kuti mune yako chinyorwa iwe unotaura nezve Lilo (zvine makore mangani izvo?).
Mubvunzo ndewokuti, ndinogona here kusarudza kuisa GRUB2 pachinzvimbo cheiro uye ndigoziva iyo mamwe ma distros awakatomisikidza?
Mhoro Essaú uye ndinokutendai nekutaura kwako: D. Munguva yekumisikidza sisitimu inoisa otomatiki Lilo.
Unogona kuisa grub (grub2) iyo inouya paSlackware DVD nematanho anotevera:
Ukangopedza kuisa Slackware uye uyu meseji unoonekwa: "Kuiswa kweSlackware Linux kwapera."
grub-kuisa / dev / sda
Uye voila: D .. Mamwe ruzivo nezve izvi:
Chimwezve chinhu ...
Lilo harisi chirongwa chakasiiwa zvachose.Iyo yekupedzisira vhezheni vhezheni yakaburitswa pasi pegore rapfuura (Chikumi 7, 2013) uye nhasi Slackware ine UEFI rutsigiro naLilo.
Mamwe mashoko: http://en.wikipedia.org/wiki/LILO_%28boot_loader%29
mutungamiriri akanaka kwazvo Peter.
kune rimwe divi, mwedzi yakati gare gare anozvidemba kunonoka uye anodzokera kuRhel, kunyangwe mune ino kesi centos asi pana 7 😛
Kutenda: D. Zvakanaka hoigo inong'un'una mumhepo yavanoti, kuti ndiri kugara neSlackware, sezvo ndiri kuifarira zvakanyanya uye ndine zvese zviri mumaoko angu :). Uye zvakare, mashandiro ane hutsinye uye ini ndinokanganwa nezvezvakachengetedzwa pamwe nekugadziriswa kwekutanga, madhiri kana rpm mapakeji uye kutsamira kwavo: D. Ndiina amai Slackware ndinonzwa ndakasununguka uye zvakanyanya uye nekuwedzera ndinozviziva naPatrick Volkerding kufunga nezve linux nhasi.
Izvo zvakanaka uye rutsigiro rwayo haruna kufananidzwa:
Mumwe mubvunzo: ndinogona here kuva nematafura maviri kana anopfuura akaiswa? Semuenzaniso, tanga nhasi ne KDE, mangwana neXFCE uye svondo rinouya neCinnamon.
Mhoroi, hongu unogona kuva nezvinyorwa zvinoverengeka .. Ehe, Cinnamon ichafanirwa kunyora: D.
Mamwe ruzivo pano: http://slackblogs.blogspot.cz/2014/04/cinnamon-slackbuilds-csb-for-slackware.html
Yakanaka dzidziso, ndanga ndichishandisa Slackware kubvira 1998 uye handisati ndambove nezvinetso nemaseva, ini handiise mapakeji kubva kune slackbuilds pavari sezvo mapakeji ari mune epamutemo marekodhi akakwana. Mumba mangu ndinoshandisawo uye mune iyi kesi kana ndikashandisa slackbuilds yemapakeji senge vlc, kunyangwe ini ndichigara ndichishandisa ./configure && make & make install Pakati pevamwe.
Makorokoto zvakare pane ino dzidziso uye nesarudzo yawakaita!
Ndinokutendai zvikuru Oscar, ndinofarawo kuti ndakaita sarudzo yekushandisa Slackware. 🙂
Wow, iwe unofanirwa kunge uri mushambadzi :).
Paunosimudzira kubva pane slackware kuenda kune imwe vhezheni, unodzoreredza kana kukwidziridza?
Zvakanaka unogona kusimudzira pasina matambudziko ne:
1 ° Wedzera zororo reiyo nyowani vhezheni mu / etc / slackpkg / magirazi
2nd Gadziriso na:
Sarudza iyo tsamba K kuti uchengete iyo yekumisikidza asi uchitarisa kumisikidza nyowani yemapakeji
Yechitatu slackpkg yekuisa-nyowani
Ehezve, ini ndinofarira kuita yakachena kuisirwa sezvo Slackware inoshanda chaizvo uye hazvidi kuti uvandudze ese maviri neatatu kubva pane vhezheni kuenda kune vhezheni 😀
Slackware, zvakanaka, ndiri kudzidza zvakawanda!
Query, kana uchichinja /etc/profile.d/lang.sh ndakaisa:
kutumira kunze LANG = es_XX.utf8
kutumira LANGUAGE = es_XX.utf8
kutumira kunze LINGUAS = es_XX.utf8
kutumira kunze LC_ALL = es_XX.utf8
XX: inoenderana nyika
Iyo keyboard idambudziko, haitore Latin American kana Spanish keyboard (iwe unoona kuti handigone kunyora), ini ndakasarudza olpc / es-olpc | olpc / es-olpc.map iyo panguva yekumisikidza yakapindura, ipapo kwete. Inogona kugadziriswa mune slackbuilds? Chii chandaida kutsanangura mukumisikidza? Chii chandinofanira kugadzirisa? Zvido.
Pindura kuna amilkar
Edza kuvhura iyo terminal usingave mudzi (ndokuti zita rako rekushandisa) uye nyora:
Mamwe mashoko: http://docs.slackware.com/howtos:window_managers:keyboard_layout
Kazhinji, unogona kumisikidza iyo keyboard zvakananga mudesktop nharaunda iwe yaunoshandisa.
Iwe wakati iwe unogadza /etc/profile.d/lang.sh, asi iwe unoisa /etc/profile.d/lang.csh futi?
kutumira kunze LANG = es_ES.utf8
Inonyanya Kubatsira: 3
Makorokoto pane uyu mupiro kunharaunda yePetercheco slacker.
Ndanga ndiri mushandisi weslackware kubvira slackware 13 uye chokwadi ndechekuti ndicho chinhu chakanakisa chandakave nacho pane yangu hard drive, ndakaedza vamwe asi ini ndagara ndichidzokera ku slackware (Gentoo ndinoida) uye izvozvi chinhu chete chandiri funga nezve yakagadzikana kana yazvino?
Chinhu chega chandinoona chisipo inharaunda inotaura chiSpanish mueirc semuenzaniso kana foramu yakanaka inoshanda ine yakawanda yekutora chikamu. Kugadzirisa kusahadzika kwemunhu wese, isu tese tinofanira kudzidza uye zvakanaka kutadza zvisirizvo zana, saka vanhu vacharasikirwa nekutya kwavo kunoshamisa Gnu / linux distro.
Izvi zvinoitika kwandiri pandinoona kuti vanhu vanotora mukana wekukorokotedza munyori uye zveichi posvo uye nenzira yavanodonhedza chero kusahadzika, zvingave zvakanaka kuve nenzvimbo kuitira kuti isu tese tigovane zviitiko zvedu uye tidzidze zvakawanda uye tisina kukanda yakawanda kwazvo (mibvunzo ye linux).
Zvakanyanya kukwirisa mumwe munhu akabvunza kuti nei iyo sbopkg kana slackpkg yanga isina kuwedzerwa, mhinduro iri nyore, iwo mapakeji akasarudzika saka anotyora uzivi hweKISS nekuda kwechikonzero ichocho slackware64 haina 32-bit kuenderana, iri "yakagadzirira" asi iyo inofanirwa kuwedzerwa dura re software kuti ikwanise kumhanya / kuumbiridza 32-bit software.
Uye mumwe mushandisi akabvunza kuti ungachinja sei kubva kde kuenda kune imwe nharaunda, nekuti sekutaura kwaPetercheco zvakamisikidzwa wobva wamhanya mune chinongedzo: $ xwmconfig
Uye menyu inowoneka kwaunogona kusarudza iyo yaunoda (yakamboiswa kare). Ipapo isu tinodzima iyo X, $ startx inotevera uye ndizvozvo.
Ndatenda zvikuru nekupa mhinduro yako uye nekuongorora kwetsamba yangu uye ndinobvuma, mamwe mawebhusaiti anotaura chiSpanish nezveSlackware anodiwa: D.
Unogamuchirwa Petercheco, kana zvichirwadza kuona kuti hapana munhu mu # slackware-es de freenode, unogona kugadzira imwe chiteshi, senge Slackeros kana Slackos kana chero rimwe zita, chinhu chakaoma pamusoro peaya maircirc vachengetedze vachishanda uye nevazhinji vashandisi ....
Pamusoro ndakaisa * Slackpkg uye zvaireva kuti slapt-tora 🙂 nekuti slackpkg inosanganisirwa.
Kwazisai uye kuenderera mberi kupa nzimbe kune slackware kwemamwe makore akawanda!
Mhoro Petercheco 🙂
Ndakafarira ichi chinyorwa nezve zvekuita mushure mekuisa Slackware. Inokodzera kwazvo kune wese munhu anoda kuyedza uye kuyedza OS * Linux.
Ndanga ndichishandisa Slackware kubvira 1994. Ini ndinogara ndine Slack yakagadzirira kuenda; izvozvi Slackware 14.1.
Nekudaro, ini handina kuishandisa kwemwedzi nekuti iyo "nVidia Optimus" kadhi rutsigiro yanga isina kunyatso kukura sezvandaizoda kune Slack.
Ini ndoda kuisa iyo "bumblebbe uye bbswitch" mapakeji eiyo nVidia kadhi kuti ibviswe; sezvo nguva zhinji ini ndasara pamusoro peiyo yakabatanidzwa Intel yeiyo i7.
Kutenda kune yako positi ndayeuka chimwe chinhu chandisina kufunga nezvacho nguva yekupedzisira pandakaedza kuisa mapakeji aya: "kusapindirana nemakumi matatu nematatu !!"
Ini ndango tsvaga ndikatsvaga iyi HOWTO inotsanangura maitiro ekuisa rutsigiro rwe nVidia Optimus makadhi ane nVidia madhiraivha; asi ... zvichiri kukosha kushandura iyo system kuita "multilib"; uye izvi ndizvo zvandisinganzwe senge!
Kana ndine yakachena Slackware Linux 64 zvishoma; imhaka yekuti ndinoda kuti ive saizvozvo. Kuwedzera dhata yekuenderana ye32-bit inoita kunge isiri yangu.
Ini ndoziva dambudziko riri pasi apa nderekuti nVidia haipe rutsigiro rwakakwana rwemakadhi ayo emifananidzo munzvimbo dzeGNU / Linux.
Ini ndichafanirwa kumirira imwe mhando yerutsigiro, kunyangwe kunze, iyo inobvumidza kuiswa kweiyi software pasina kugadzira "multilib" system.
Ndatenda nekundiyeuchidza 🙂 Handina kutanga Slack kwemwedzi nekuti neLinux Mint 17 rutsigiro rweNVidia Optimos yatove kushanda (pamwe nemadhiraivha eNovember) kubva kuisheni uye yakagarika zvekuti munhu anopedzisira akanganwa kwayinobva: - /
Vazhinji uye vazhinji vashandisi vanofara neSlackware !!! 🙂
Mifananidzo yako yaizotaridzika zvirinani nemaneja wewindows seChiedza 16 😀
Ndatenda kwazvo shamwari ... ndanga ndiri chinguva ndichisvetuka kubva ku distro kuenda ku distro, asi ndadzokera kuSlackware ne KDE. Ehezve, panguva ino Slackware Yazvino uye ndinofunga Slackware 14.2 kana 15 isu tichaona, zvinoita sekunge yave kuda kuenda ku caramel: D.
Yakanaka petercheco chinyorwa!
Ini ndakanga ndisati ndamboshandisa iyi distro kusvika nhasi, ini ndanga ndagara ndichisarudzira vamwe vane graphical installer uye inoretically hushamwari maererano neshanduko pakati windows uye Gnu / Linux, asi ndinoshamiswa nekuita kweSlackware, ini ndichiri kuda kugadzirisa zvimwe zvinhu zvakakosha sekhibhodi nezvimwe, asi handifunge kuti zvakaoma.
Changu chekuzvidemba ndechekuti zvakatora nguva yakareba kuyedza iri basa rehunyanzvi.
Kwaziso uye makorokoto echinyorwa chikuru, irubatsiro rwakakura.
Mhoro shamwari uye ndinokutendai chaizvo neakanaka chiyero chechinyorwa changu :). Ndinofara kuona kuti inobatsira vashandisi :). Kwaziso uye unakirwe nedunhu ...
MHORO DZESHAMWARI NDIRI MUTSVA KU SLACKWARE UNOGONA KundIBATSIRA KUTAIRA RAMBI…
Izvi zvinokubatsira: http://www.slackware.com/~mrgoblin/slackware-lamp.php
Ndatenda zvikuru petercheco.
Iwe wakanyora yakanaka posvo kune idzva kune slackware. Yakandishandirawo zvakanyanya uye kuti ini ndinoshandisa iyo distro kubvira 2008.
Chinhu chikuru nezve slackware ndechekuti hachichinje zvakawanda kunze kwekunge zvichidikanwa. Ikozvino pane kuburitswa kutsva, slackware 14.2. Tiri kumirira itsva recharge post?
Pindura kune antares_alf
Kutenda nekutumira, zvakandibatsira sezvo iwe usingafungidzire.
Ini ndiri mutsva kune ino distro, ndakaverenga paLinuxQuestion kuti KDE Plasma 5 inogona kuiswa paSlackware 14.2.
Chandisinganzwisise ndechekuti ndingaiisa sei?
Ini ndinoshandisa sei AlienBob repository?
Ini ndauya pano nemukana, iyi dzidziso yakandibatsira zvakanyanya nekuti ndaida kuyedza Slackware.
Kusvika nanhasi ndichiri iine yakaiswa pane desktop yangu PC pasina kukundikana, kugadzikana, kamwe chete Uye izvozvi ini ndangoisa pairi palaptop kuti ipinde zvakadzama munyika yelinux kunyanya (Slackware / Zenwalk)
Ichokwadi kuti pakutanga zvainge zvakaoma, chimwe chinhu senge pandakabuda kubva windows kuenda ku ubuntu / linuxmint ... hahaha. Ini ndaifanira kuita tsvagiridzo yakawanda pa linux.
Ini ndanga ndaedza akawanda ma distros, asi iyi kwandiri ndeye inoenderana nekudzidza kwangu ne linux. Ndichiri neimwe imwe kubva kuchikoro chekare inova iyo Freebsd.
Pane chero munhu anoziva kuita tsika Slackware kugovera? Ndakaedza liveslak asi ini handizive kuti ndeapi mirairo ..
Mushure memakore gumi nemaviri ekuyedza nekukanganisa pamwe nekuparadzirwa kwakasiyana siyana, linux, bsd, windows, osx, ini ndakawana system inondishandira, ndinogara ndichidzora midziyo yevatengi kuisa masisitimu, kugadzirisa, kuyedza, ini ndaida chimwe chinhu chakatsiga, ndiri kuenda zuva rechipiri re slackware Uye kudzidza, zvese zvakatanga newifislax yandakaona nekukasira pandakatarisa ndinoona kuti yaive yakavakirwa pane slackware ... ipapo ndakaverenga pfungwa dzevashandisi vematanho ese uye zviitiko zvavo ... ndakanzwa adrenaline kutsvaga kwakapera.
yakanaka forum ndinoisiya seyokupedzisira,
Shandisa Simba, Ruka!
Classic Dingindira Rinodzosera: Kudzokera kune yakasarudzika Firefox interface